I-Fordged Hoe & Pick Ax
Ifosholo & Ok
IGemlight Cane Machete yenza umsebenzi osheshayo webhulashi eliwugqinsi, ukhula olude, imivini enamandla kanye namagatsha abanzi, kanye nezinduku nendima kabhanana kanye nokhokhonathi.
Njengawo wonke amakhehla e-Gemlight, ine-blade blade kusuka ku-SAE 1070 high carbon steel blade - phakathi kokuqina nokucijile emhlabeni ngemuva kokucima nokushisa ngokwelashwa kokushisa. Futhi ocelemba bakamoba bafaka insingo ebanzi, ebushelelezi ecijile efanelekile yokugenca izingongolo zommbila nomoba. Imvamisa i-blade ixhunywe ukuvumela umsebenzisi ukuthi adonse umhlanga oqoshiwe ezitshalweni ezisamile. Ubukhulu bekhasi elincanyana livumela ukusika okulula ngezitshalo zesitayela somoba. Futhi hlinzeka nge-blade plain emuva, futhi kungcono kakhulu. Ucelemba unensimbi ebukhali elungele ukusika nokusika
Ama-Machetes esitayela seGemlight Bush athandwa kakhulu futhi atholakala kakhulu emhlabeni wonke. Yizembe elenzelwa yonke into elinensimbi ejwayelekile, eqonde ngqo emuva. Ikhaba livame ukukalwa ngokulinganayo futhi liqine ngokwanele. Iyaphatheka kakhulu, ingafakwa isheath kalula ngokuhamba nayo.
Ucingo lwe-Eletro Lashukumisa
Sizibophezele ekunikezeni ikhwalithi ephezulu ye-Electro GI Wire kumakhasimende. Sinezitshalo eziqhubekayo zokuqinisa ucingo eziqhuba inqubo ephelele ngokulandelana okukodwa okuqinisekisa umkhiqizo osezingeni eliphakeme. Ukufakwa kwe-inthanethi ngocingo kunikeza ukuthamba okuningi. Esigabeni sokugcwala, okwamanje kudluliswa ngomucu ocwiliswe kusixazululo esinamanzi esiqukethe i-zinc kuyizinhlayiyana okuholela ekuthambekeni kwe-zinc ocingweni ngokufanayo. Ngemuva kokufakwa, ucingo ludluliswa ngesixazululo sokuvikela ukugqwala bese luhanjiswa ngepuleti elishisayo ukususa umswakama ocingweni bese ligoqeka ekuthatheni phezulu. Ukuhlolwa okubonakalayo kokupholisa nokumboza kwenziwa ukuqinisekisa umkhiqizo osezingeni eliphakeme. Njengoba ngamunye imfuneko gi wire for inkukhu anezikhala, weld anezikhala, redraw izinga, Redrawing Wire lashukumisa iyatholakala. Icutshungulwe kusuka kukhabhoni ephansi, kukhabhoni ophakathi nensimbi ephezulu yensimbi.
Ucingo oluthambile oluhlanganisiwe lubizwa nangokuthi i-black iron wire, i-soft annealed wire ne-annealed iron wire.
Ucingo oluhlanganisiwe lutholakala ngokusetshenziswa kokuncishiswa okushisayo. Yenziwe nge-carbon steel wire.
Ucingo lwe-Annealed lunikeza ukuguquguquka okuhle kakhulu nobumnene ngenqubo yokwehliswa kwamahhala komoya-mpilo. Futhi ucingo olumnyama olunamafutha lwakhiwa ngenqubo yokudweba ngocingo, isengezo kanye nomjovo kawoyela kaphethiloli. Singayenza ibe yinsimbi eqondile yokusika futhi senze ngokuvumelana nemfuneko ekhethekile yamakhasimende.
IMachete 213 14 inch
Ikhabhoni ephezulu yensimbi yensimbi engu-14 ″ epholishiwe inikeza amandla aphezulu. Isibambo sepulasitiki esimangelengele sikhululekile ekubambeni okuqinile lapho sisetshenziswa，ingakusiza ukuthi usebenzise kangcono ngaphandle.
Imikhiqizo yethu ingaba ukumelana nokugqwala okuhlala isikhathi eside nokuqina okukhulu ezimeni ezifanayo, sizoba ukukhetha kwakho okuhle kakhulu.
Hot bacwilisa wire lashukumisa
I-Hot Dip GI Wire yinqubo ehilela ukudlula kocingo kubhavu oncibilikisiwe we-zinc nokushisa kwethangi ngo-850 F okuholele ekugqokeni kwe-zinc ocingweni olungaphezulu. Lokhu kumbozwa kwe-zinc kunikeza ukumelana nokugqwala ocingweni futhi kukhulisa impilo ende yomkhiqizo. Wire lashukumisa yaziwa nangokuthi GI Wire, Lashukumisa Binding Wire, GI Wire, Wire lashukumisa, Hot-Dip Wire lashukumisa, Wire lashukumisa, Izintambo Camera, Redrawing Wire lashukumisa, lashukumisa yensimbi wire, wire lashukumisa, lashukumisa Steel Wire, lashukumisa Iron Wire, Izintambo Ezihlanganisiwe Ezihlanganisiwe, Izintambo Ezihlanganisiwe Ezigcwele, Izintambo Ezishisiwe Zinc Plated Wire.
Into BS512MHY Umkhiqizo Ukukhanya kwe-Gemlight noma i-OEM / ODM
Isitayela seBlade Round ikhanda lokwela Usayizi Wefosholo 235 * 300 * 970mm
Ubude obuphelele 970mm Blade Izinto High Carbon Steel Blade nge Mn Enhanced / SAE1070
Ukwelashwa kwe-Blade Heat Ukuqedwa Okugcwele kwe-Blade nokushisa Blade Ukuqina HRC45-55
I-Tang ephelele Yebo Uphaphe lweBlade Ubulukhuni obukhulu, ukuvumelana nezimo nokumelana.
Uhlobo lwe-Blade Edge Oku-Sharped kwangaphambili Ukwelashwa Kwendawo Engaphezulu Futha camera / Black noma ngezifiso
Ukuvikelwa kwekhanda lokwela Ngesikhwama se-PVC Ubukhulu beBlade Usayizi 1.4mm
Imininingwane ye-Blade Ukugaya okuyinhloko kusunguliwe Ifosholo Nesibambo FUhlobo lwe-ixed Kuvukile
Ingqikithi Yesisindo 1.5KG Izinto zokubamba Izinkuni
I-gemlight machete yenziwa ngensimbi ekhethekile ephezulu yasentwasahlobo ene-High Manganese eyenziwe ngcono. Insimbi ye-SAE1070. I-Manganese, lapho ithanjisiwe, inika i-blade ukuqina okuhle kakhulu, ngenkathi ithola amandla nobulukhuni obuphakeme futhi ithuthukise izakhiwo zokuqina kwensimbi.
I-Pick Ax, esetshenziselwa ukuhlobisa izindawo. I-pickaxe kulezi zinsuku imiphetho emibili. Isiphetho esikhonjiwe sisetshenziselwa izindawo ezinamadwala noma ukhonkolo. Isiphetho sesibili siyisicaba futhi sisetshenziselwa ikakhulukazi ukuhlola. Njengoba linekhanda elinzima kangaka nephoyinti lokuxhumana elincanyana ekhanda, ithuluzi liba ithuluzi elisebenza kakhulu lezindawo eziqinile, ezinamadwala nezikhonkolo.
I-Hoe iyithuluzi lengadi elinensimbi ezacile evame ukusetshenziselwa ukuqeda ukungcola. IHowe, elinye lamathuluzi amadala kakhulu ezolimo, inqubo yokumba ehlanganisa insingo ebekwe ezingeni elifanele lesibambo eside. Inkemba yegeja lesimanje iyinsimbi nesibambo sokhuni. I-Gemlight Planting Hoe nayo ibe yithuluzi elisebenza kahle kakhulu ekusebenzeni kwezolimo nezingadi ezweni lonke.
IGemlight Panga Machete isetshenziswa kakhulu eCaribbean nase-Afrika. Isisu sayo esijulile sinikeza isisindo sokusika nokugoba ukusika. Iphuzu eliguqukile lingagxilisa amandla endaweni encane yokubhoboza.
Njengoba insimbi ephezulu yensimbi yekhabhoni iqine kakhulu kunensimbi engagqwali. Futhi le machete inika i-carbon steel blade egcina ubukhali isikhathi eside kunanoma yiluphi olunye uhlobo lwemojuli. Ukucima nokushisa okwenza blade ephelele ithole ubulukhuni nobulukhuni obukhulu. Futhi, i-blade i-anti-rust futhi ivikelwe ngokuvikelwa kwengubo ecacile. Kufanele uyomise ngemuva kokusetshenziswa kahle.
Amathuluzi we-Dingzhou Gemlight Cutting Co., LTD.
Ikheli: IShuangtian Industrial Park, iDingningdian Town, iDingzhou City, Isifundazwe saseHebei, eChina